ISAHLUKO 7: IINKQUBO ZENJONGO-IGeofumadas
ISAHLUKO 7: IINKCUKACHA ZENJONGO
Into nganye iqulethe uchungechunge lwezakhiwo eziluchaza, ukusuka kwiimpawu zalo zejometri, ezifana nobude balo okanye i-radius, kwisikhundla kwinqwelo e-Cartesian yamanqaku aphambili, phakathi kwezinye. I-Autocad inikezela iindlela ezintathu esinokubonisana ngazo kwiipropati zezinto kwaye zize ziguqule. Nangona esi sihloko esiza kuthatha ingcaciso engakumbi.
Kukho iipropati ezine ngokubhekiselele ekufuneka zihlaziywe apha njengoko sele sifunde indlela yokudala izinto ezilula kunye nezixhobo. Ezi zakhiwo zihlala zisetyenziswa ngokusebenzisa indlela yokuhlela imidwebo ngamacandelwana, esiza kufunda kwiSahluko se-22, nangona kunjalo, inokusetyenziswa kwakhona kwizinto ezithile, ukwahlula ngokukodwa. Ezi zakhiwo zi: umbala, uhlobo lomgca, ubukhulu bomgca kunye nokukhanya.
Ngoko, ngokuxhomekeka ekuhambeni kamva kwiingeniso zokungasebenzisi izicelo kwizinto ngokwazo kodwa zihlelwe ngamacandelwana, makhe sibone indlela yokutshintsha umbala, uhlobo lomgca, ubukhulu kunye nokungafihli kwezinto ezithathiweyo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-6.7 Kwaye iphi imiyalelo yesiNgesi?
Post Next 7.1 UmbalaOkulandelayo »